> Household wear>2 DOORS CABINET
2 Door cabinet with2adjustable shelves and keylock. ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် စင်(၂)စင်နှင့် သော့ခတ်နိုင်သည့် နှစ်ဖက်ဖွင့်တံခါးဗီရို။ Size: W88*D40.7*H88 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၈၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၈၈ စင်တီမီတာ Including2adjustable shelves ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင် (၂)စင်ပါဝင်သည်။ (extra shelf also available for sale) (သီးသန့်ဝယ်ယူနိုင်သည့် အချပ်ပိုစင်များလည်းရှိပါသည်။)